विद्यालयको जग्गामा वडाको भवन बन्दै, अदालतको आदेशको बेवास्ता
इटहरी उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडाले अहिले भाडामा लिएको भवनबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिले इटहरी–४ स्थित कचना स्कुल छेउमा रहेको जनता माध्यमिक जग्गामा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ...
९ बैशाख, २०७८
अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भएकै हो त ? के छ परम्परा ?
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यको सिफारिस सरकारले गर्यो । सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृति पायो । सर्वोच्च अदालतले विघटि...
तत्कालका लागि ओली हटाउने योजना टर्‍यो, विशेष अधिवेशन विकल्प
सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। ...
सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेदेखि खासै बिजनेस नपाएको प्रतिनिधिसभामा सरकार परिवर्तनको कसरत सुरुदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकार परिवर्तन हुने या यही सरकारले निरन्तरता पाउने भन्ने विषय नटुंगिदा अहिले संसद्को अन्...
कृष्ण बहाबको बारेमा